Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Bhutan » Ny fifandraisana Bhutan - Israel vaovao
saina saina pixabay
Ny firenena bitika Aziatika Tatsimo dia tsy manana fifandraisana diplomatika afa-tsy amin'ny firenena vitsivitsy ary mandrefy ny fahombiazany mifototra amin'ny indeksan'ny fahasambarana nasionaly
Israel tamin'ny sabotsy dia nanambara fa nametraka fifandraisana diplomatika amin'i Bhutan, firenena fahadimy nanao izany tao anatin'ny volana vitsivitsy niaraka tamin'ny Emira Arabo Mitambatra, Bahrain, Sudan ary Maroc. Saingy tsy firenena Arabo i Bhutan, ary ny ankamaroan'ny olona naheno ny vaovao momba ny fifanarahana ara-dalàna dia mety nanontany tena hoe: "Inona izany Bhutan?"
Ny masoivoho Israel ho any India Ron Malka sy ny masoivohon'i Bhutan any India Vetsop Namgyel dia nanao sonia ny fifanarahana ara-dalàna tamin'ny sabotsy alina. Ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana dia nanjary taorian'ny fifampidinihana miafina teo amin'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny firenena roa tonta, anisan'izany ny fitsidihana nifamaly, tao anatin'ny taona vitsivitsy nananganana fifandraisana ara-diplomatika, hoy ny minisiteran'ny raharaham-bahiny, izay nanamarika fa miara-miasa amin'i Bhutan amin'ny alàlan'ny Mashav Division, the Agency for International Development Fiaraha-miasa. Tamin'izany no nahatongavan'ireo mpianatra avy any Bhutan nankany Israel mba handray fiofanana momba ny fambolena.
Araka ny fanambarana iraisana momba ny fifanarahana, mikasa ny hiara-miasa amin'ny fampandrosoana ara-toekarena, teknolojia ary fambolena ireo firenena. Nolazaina ihany koa fa ny fifanakalozana ara-kolontsaina sy ny fizahan-tany dia "hohatsaraina".
"Ity fifanarahana ity dia hisokatra fotoana bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa ho tombontsoan'ny olona roa tonta," hoy i Malka nibitsika.
Ny firenena Aziatika atsimo ao Bhutan, fantatra amin'ny anarana hoe "Land Of The Thunder Dragon," dia firenena kely miorina amoron-tany izay miorina eo amin'ny sisiny atsinanan'ny Himalaya. I Tibet dia eo akaikin'ny avaratra ary India any atsimo ary manana mponina latsaky ny 800,000. Ny renivohiny sy ny tanàna lehibe indrindra dia Thimphu. Ny velarantanin'ilay firenena dia 14,824 kilometatra toradroa (38,394 kilometatra toradroa), mahatratra ny haben'ny fanjakan'ny Etazonia any Maryland.
fivavahan'ny fanjakana ofisialin'i Bhutan izy ny Vajrayana Buddhism, ampiasain'ny hatramin'ny telo ampahefatry ny mponina ao amin'ny firenena. Ampahefatry ny mponina no manao Hindoisma. Azo antoka ny fahalalahana ara-pivavahana ary voarara ny didin'ny governemanta.
Bhutan dia lasa mpanjaka nanjakan'ny lalàm-panorenana rehefa nanao ny fifidianana ankapobeny voalohany tamin'ny 2008. Monarchy tanteraka izy io. Ny titre ofisialin'ny mpanjaka dia Dragon King.
Ny firenena dia manana fifandraisana diplomatika ofisialy amin'ireo firenena 53 monja, ary lasa mpikambana ao amin'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1971. Ohatra, i Etazonia sy i Angletera dia ao amin'ireo firenena izay tsy manana fifandraisana ofisialy amin'i Bhutan. Ny masoivoho dia fito fotsiny amin'ireo firenena 53 ireo, ary India, Bangladesh ary Koety ihany no manana masoivoho ao Bhutan. Ny firenena hafa dia mitazona fifandraisana ara-diplomatika tsy ara-potoana amin'ny alàlan'ny masoivoho any amin'ny firenena akaiky. Ny Internet sy ny fahitalavitra dia tsy nahazo niditra afa-tsy tamin'ny taona 1999.
Bhutan dia mitazona fifandraisana matanjaka ara-toekarena, stratejika ary ara-tafika amin'i India, ary manana fifandraisana politika sy diplomatika matanjaka amin'i Bangladesh. Ny tena fanondranana azy dia ny angovo mandeha amin'ny herinaratra mankany India. Ny firenena dia mikatona amin'ny ankamaroan'ny any ivelany indrindra ny any ivelan'i Azia atsimo, ho toy ny fomba hitazomana ny kolontsain'ny firenena sy hitehirizana ny harena voajanahary. Na dia mametra ny fizahan-tany aza ny firenena, ny olom-pirenena Indiana sy Bhutanese dia afaka mifindra any amin'ny firenena samy hafa tsy misy pasipaoro na visa. Bhutan nanidy ny sisintaniny niaraka tamin'i Shina teo akaiky teo taorian'ny fanafihan'ny Sinoa an'i Tibet tamin'ny 1959
Ny fiteny ofisialin'ny firenena dia Dzongkha, fantatra ihany koa amin'ny hoe Bhutanese, izay iray amin'ireo fiteny Tibetana 53 miteny manerana an'i Azia Afovoany. Ny teny anglisy anefa no fiteny fampianarana any an-tsekoly any Bhutan.
Bhutan dia fantatra ho firenena sambatra indrindra eran'izao tontolo izao ary, raha ny marina, ny fandrefesana ny firenena tamin'ny Gross National Happiness Index dia napetraky ny governemanta Bhutan tamin'ny taona 2008 tao amin'ny lalàm-panorenany ary laharana ambony noho ny vokatra anatiny eto amin'ny firenena. Misy dikany ihany izany, satria i Bhutan dia iray amin'ireo firenena mahantra indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny tahan'ny fahantrana 12 isan-jato.
Ho an'ireo mpamatsy sakafo eo amintsika, Bhutan dia manana ny lovia nentin-drazany. Ny lovia nasionaly naroso indrindra dia voalaza fa Ema Datshi, fitambaran'ny voankazo sy fromazy. Ny sakafo nentin-drazana hafa dia misy an'i Jasha Maroo, na Maru, izay akoho masiaka, sy Phaksha Paa, na henan-kisoa miaraka amin'ny sakay mena.
Na dia fantatra ho toerana tena azo antoka aza i Bhutan ary tsy fahita firy ny halatra, nilaza kosa i Lonely Planet fa misy ny loza sy fahasosorana tsy maintsy tadiavina, ao anatin'izany: ny alika amoron-dàlana dia mitabataba be amin'ny alina ary ahiana ny haromotana; marokoroko sy misamboaravoara ny arabe; Ireo vondrona mpampisaraka Indiana dia mihetsika manerana ny sisin-tany atsimo atsinanan'i Bhutan; ary ny orana, rahona, lanezy ary riandrivotra dia mety hisy fiantraikany amin'ny dia an-dàlana sy amin'ny rivotra.
Bhutan dia fantatra amin'ny monasitera, trano mimanda - fantatra amin'ny anarana hoe dzongs - ary ny velaran-tany mahavariana. Ny mpitsidika dia tsy maintsy mpizahatany amin'ny fitsidihana mialoha, mialoha ny vidiny, fitsidihana voatarika, na vahinin'ny governemanta. Azon'izy ireo atao ihany koa ny miditra ny firenena amin'ny maha vahinin'ny "olom-pirenena manana ny toerany" na miaraka amin'ny fikambanana mpilatsaka an-tsitrapo.
by MARCY OSTER, NY LINE MEDIA
Mety misy indostria marobe kolontsaina toa ny fizahan-tany ve tafiditra?